Abaaro xoogan ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah Gobolka Gal Guduud | maakhir.com
Abaaro xoogan ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah Gobolka Gal Guduud
January 8, 2008 in Somalia
Balmbale:-Abaaro xoogan ayaa laga soo tabinayaa inay ka jiraan deegaano ka mid ah Gobolka Gal Guduud kuwaasi oo ay xoolaha iyo doonyaduba gaadheen meel xun oo aad khatar u ah,meelaha ugu badan ee laga soo qalinayo ayaa waxa ka mid dhulka miyiga ah ku hareeraysan magaalada Balambale, deegaankaasi ayaan in mudo ah wax roob ahi helin.
Dadka ayaa arintaasi ku micneeyaay in ay ka dambeysay kadib markii la waayay xooluhu daaq ay daaqaan iyadoo labadii sano ee ugu dambeysay aysan gobolku kadi’in wax roobab ah oo la taaban karo, deegaankaasi ayaa waxa ku yar dhulka biyaha kaydiya ama loo yaqaan baraaga ah.
Qaar ka mid ah wax garadka Deegaanka Caabud waaq ayaa warbaahinta la soo xidhiidhay waxayna sheegeen inay deegaankaas oo idil ay ka jiraan Abaaro xoogan kuwaas oo ay dadka qaarkiis qarka u saaran yihiin inay Biyo la”aan la dhintaan,waxay kaloo sheegeen inay jiraan Boqolaal qoys oo ah reer guuraa kuwaasi oo ay xoolahoodii aafeeyeen Abaaruhu.
Odayaashaasi waxay kaloo sheegeen in Hay”adda ah ku shaqule arimaha deegaan ay arintaasi wax ka qabtaan sida ugu dhakhsiin yaha badan si looga badbaado Abaarahaasi xoogan,waxay leeeyihiin ma jiraan cid taakulaysay dadkaasi ama ka gacan qabatay dhibaatooyinkaasi soo food saaray.
Dhanka kale dadka deegaankaasi waxa intaasi u sii dheer Cudurka shuban biyoodka oo fara baas ku haya dadka deegaankaasi ku nool, goobaha caafimaadka oo aanu xidhiidh la samaynay ayaa waxay noo sheegeen in horaatnii bishan la soo gaadhsiiyay dad aad u fara badan kuwaasi oo la il daran Cudurka dilaaga ah ee Shuban Biyoodka loo yaqaan.
Dadka ugu badan ee uu saameeyay xanuunkaasi ayaa waxa lays oran karaa inay yihiin dadka Saboolka ah ee ka soo barakacay dagaalada ka socda Magaalada Caasimada u ah Dalka Somaliya ee Muqdisho.
« Jendayi Frazer oo walaac ka muujisay xaalada Dalka Somaliya
Dagaal xoogan oo maanta ka dhacay gudaha Magaalada Bosaas »